बाबुरामले प्रधानमन्त्री ओलीको मागे राजीनामा « Kakharaa
बाबुरामले प्रधानमन्त्री ओलीको मागे राजीनामा
२७ बैशाख, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् । बजेट अधिवेशनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जीर्ण शरीरलाई आराम दिनआग्रह गरे ।
आफूहरु आफ्नो सांसद अपहरण गरेको भनि प्रहरीमा उजुरी दिन जाँदा उजुरी नलिएको प्रति पनि उनले गुनसो गरे । नेता भट्टराईले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न आग्रह गरे । विप्लव समूहमाथि लगाइएको बन्देज खुल्ला गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
सानातिना मुद्दा लगाएर निलम्बनमा राख्ने काम गर्न नहुने बताउँदै उनले हरिनारायण रौनियारलाई गरेको निलम्बन फकुवा गर्न पनि आग्रह गरे ।